Vaovao - Fahasamihafana eo amin'ny syringe luer-lock sy syringe luer-slip
Ny tsy fitoviana eo amin'ny syringe luer-lock sy ny syringe luer-slip
Ny syringe Luer-hidy dia be mpampiasa any amin'ireo firenena tandrefana. Any amin'ny ankamaroan'ny firenena an-dàlam-pandrosoana dia malaza kokoa ny syringe luer-slip noho ny vidiny ambany.
Ny famolavolana loer slip dia toa tsotra - azonao atao ny mampiditra azy io. Nefa tsy ny fanamorana izany, fa ny olana ara-pitsaboana matotra mifandraika amin'ny fahafahan'ny marary omena fatra marina sy fampidirana fanafody maharitra tsy tapaka. Misy fiantraikany amin'ny fitsaboana farany ny marary koa izany.
Na dia mila dingana fanampiny ho an'ny mpitsabo mpanampy aza ny syringe luer-lock alohan'ny hampiasana azy, manome antoka ny fifandraisana mafy sy ny fiarovana ho an'ny matihanina ara-pitsaboana sy ny marary izy io. Na mampifandray mpampitohy fampidirana tsy mila filana na fantsona samihafa izy io, dia tsy ho tapaka mora foana ny fifandraisana amin'ny toe-javatra samihafa. Izy io dia miantoka ny fizotran'ny fitsaboana rehetra mandeha tsara! Izy io dia misoroka an-tsakany sy an-davany ny mety hisian'ny fatra fanafody tsy marina, ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina ary ny fidiran'ny rivotra.
Amin'ireto toe-javatra fampiharana ara-pitsaboana manaraka ireto, ny syringe luer-lock dia tena soso-kevitra:
1 Rehefa manamboatra zava-mahadomelina misy poizina dia mampiditra fanafody viscous (toy ny lipiodol) ny sampana mpanelanelana. Raha sendra tapaka tsy tapaka mandritra ny fotoana fampiasana ny vinaingitra, dia mihintsana no mihintsana ireo fanafody misy poizina ireo.
2 Rehefa mifandray amin'ny syringe ny hemodialysis dia hiteraka heparin na ra mivoaka amin'ny fantsona raha miova ny toeran'ny marary ,;
Sampana 3 izay misy fanafody maro kokoa omena mandritra ny tsindrona bolus intravenous, toy ny sampana vonjy taitra, ICU, sns.; ny fidirana intravena vao napetraka dia mitaky tsindrona intravenna maro isan-karazany, toy ny furosemide na fanafody fampidinana tosidra. Somary kely ihany ny fatra voalohany. Rehefa mifamatotra amin'ny fanjaitra mipetraka ny syringe ary sendra sendra tsindrona tsy misy fanjaitra ilay mpampitohy tsy misy fanjaitra, tsy azo antoka ny fatra fanafody
4 Rehefa mifandray amina catheter vena afovoany dia afaka mampihena ny mety hisian'ny embolism ny rivotra vokatry ny fanapahana ny syringe
Inona koa, ho an'ny famolavolana luer-slip, misy ny mety hisarahana ary hisaraka mandritra ny fizotran'ny fisintomana. Rehefa mampiasa ny volavolan-tseranana amin'ny seranana dia aza esorina mafy loatra izany. Raha tsy izany dia mety vaky ny visy ary tsy mora esorina, izay hisy fiantraikany amin'ny vokan'ny fifandraisana.
Mamokatra Antmed Syringes fanidiana luer-lock 1mL / 3mLary mahay manatanteraka baiko be. Miasa manodidina ny famantaranandro izahay ary manitatra ny tsipika fanamboarana anay. Hatreto dia nahazo kaomandy syringe 60 tapitrisa 1mL eran-tany isika. Azafady mba mifandraisa aminay raha ilaina izany. Ny mailakay dia: info@antmed.com
Fotoana fandefasana: Feb-20-2021